बेइजिङ विश्व बागवानी एक्स्पोमा 'नेपाल दिवस'- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
बेइजिङ विश्व बागवानी एक्स्पोमा 'नेपाल दिवस'
आश्विन ५, २०७६ लक्ष्मी लम्साल
बेइजिङ — हरित जीवन, सुन्दर घर भन्ने नाराका साथ बेइजिङमा जारी विश्व बागवानी एक्स्पो अन्तर्गत लुम्बिनी बगैंचामा आइतबार ‘नेपाल दिवस’ मनाइएको छ।
परम्परागत कुमारी नृत्यबाट सुरू भएको नेपाल दिवस कार्यक्रममा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालले चीनको विकास र करोडौं जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट उकास्ने चिनियाँ प्रगतिप्रति छिमेकी भएको नाताले नेपालको तर्फबाट खुशी व्यक्त गरे ।
नयाँ चीन स्थापनाको ७०औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिँदै उनले दुवै देशबाट भैरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणले अन्तरदेशीय सम्बन्ध नयाँ उचाइ पुगेको बताए। नेपालले अर्को वर्ष नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को आयोजना गरेकाले चीनबाट धेरै भन्दा धेरै पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणमा जान पनि उनले अनुरोध गरे।
विश्व बागवानी एक्स्पो–२०१९ गत वैशाख १६ अर्थात् अप्रिल २९ देखि सुरू भएको हो । १ सय ६२ दिनसम्म चल्ने यो एक्स्पो अक्टोबर असोज २० मा सम्पन्न हुनेछ। यस अवधिमा २५०० वटा श्रृंखलाबद्ध सांस्कृतिक गतिविधि भैरहेका छन्, त्यसमध्ये एउटा कार्यक्रम नेपालले पनि गरेको हो।
गत मध्य वैशाखमा चीनमा भएको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेइजिङको यानछिङ जिल्लामा लुम्बिनी शान्ति बगैंचाको उद्घाटन गरेकी थिइन्। विश्वका १ सय १० मुलुक तथा क्षेत्रका संगठनले एक्स्पोमा भाग लिएका छन्। एक्स्पोभित्र ८० वटा बगैंचा पेभेलियन र घरहरू बनाइएका छन् ।
चीनको खुनमिन विश्व बागवानी एक्स्पो, सांघाई विश्व एक्स्पो र पहिलो चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्स्पोपछि चीनले आयोजना गरेको यो सबैभन्दा ठूलो एक्स्पो मानिन्छ।
गत अप्रिल अन्तिम साता बेइजिङमा भएको बीआरआई दोस्रो शिखर सहकार्य मञ्चसँगै बागवानी एक्स्पो उद्घाटन गरिएको थियो । चीनको यस वर्षको घरेलु कूटनीतिमा बेइजिङ विश्व एक्स्पो पनि एक हो ।
एक्स्पोस्थल राजधानी बेइजिङ केन्द्रदेखि ७४ किमि टाढा यानछिङ जिल्लामा पर्दछ । सोही जिल्लाले सन् २०२२ बेइजिङ ओलम्पिक पनि गर्दैछ । एक्स्पोभित्र नेपाली इन्जिनियर नरेन्द्र मुलको डिजाइनमा लुम्बिनी शान्ति बगैंचा निर्माण गरिएको छ ।
बेइजिङमा लुम्बिनी शान्ति बगैंचा
प्रकाशित : आश्विन ५, २०७६ २०:२१
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दसैं र तिहारको बीचमा नेपाल भ्रमण गर्ने भनिँदै आएको छ । भदौ तेस्रो साता नेपाल पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई सीको आसन्न भ्रमणको तयारीका रूपमा अर्थ्याइएको छ । यद्यपि नेपाली र चिनियाँ दुवै पक्षले भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेका छैनन् र भ्रमण नहुने संकेत पनि दिएका छैनन् ।
आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमणकै वातावरण मिलाउन चिनियाँ विदेशमन्त्री काठमाडौं उत्रिएका बेला चिनियाँ दूतावास आसपास क्षेत्रमा केहीले धर्ना बस्ने जमर्को गरे । त्यो सानो घटना थियो । तर त्यसको रिपोर्टिङ बेइजिङसम्म पुगिसकेको छ ।
नयाँ चीन स्थापनाको ७० औं वार्षिकोत्सव (अक्टोबर १) को घरेलु गतिविधि टुंग्याएर सीले विदेश भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाएको अनुमान छ । अधिकांश विशेषज्ञ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मध्य अक्टोबरतिर हुने भनिएको वुहान वार्ताको दोस्रो संस्करणका लागि सी भारत गएपछि मात्र नेपाल आउने अनुमान गरिँदैछ । तर उनी सिधै नेपालकै लागि काठमाडौं उत्रिनेमा भने कमै आशावादी देखिन्छन् । गत अगष्ट १ मा यही वार्ताको वातावरण मिलाउन भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर बेइजिङ उत्रिएका थिए । यद्यपि कश्मीरको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्ने मुद्दा चर्किएपछि चीनले जयशंकरलाई असन्तुष्टि पोखेर पठाएको थियो ।
दुई दशकभन्दा लामो अर्थात् १९९६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ चमिनले नेपाल भ्रमण गरेयता कुनै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन् । बेइजिङको ‘ग्रेट हल अफ द पिपुल्स’ भित्र र बाहिर पुग्ने कुनै पनि नेपाली नेताहरूले निम्ता दिएका दियै छन् भने काठमाडौं उत्रिने कुनै पनि चिनियाँ नेतासामु भ्रमणको निम्तो एउटा निरन्तरताजस्तै बनेको छ । यद्यपि चिनियाँ राष्ट्रपति भ्रमणमा आउने कुरा दुई वर्ष अघिजस्तै हल्लाखल्लाका कारण रद्द नहोस् भन्नेमा यसपालि नेपाल सरकार चनाखो भएको हुनसक्छ ।
सन् २०१३ मा सत्तारोहण भएसँगै दक्षिण एसियाका सबै देश भ्रमण गरिभ्याएका सीले छिमेकी नेपालका लागिचाहिँ विशेष ‘सरप्राइज’ कहिले दिने होलान् ? सीको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकियो । दोस्रो कार्यकालमा एकचोटी अवस्य नै नेपाल भ्रमण गर्लान् भन्ने धेरैको अनुमान छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण किन रोचक तृष्णा बनेको हो भने उनको ‘ग्ल्यामर्स’ व्यक्तित्व जसमा आर्थिक विकास, विश्व शान्ति, स्थिरता र छिमेकप्रतिको सम्मान’ लुकेको छ ।
सबैभन्दा पहिले दक्षिण एसियाको पुल बन्नसक्ने नेपाल पुगेर पुलको संरचना हेर्नु चिनियाँ शीर्षनेताका लागि अपरिहार्य कुरा हो । पुल बलियो भएन भने चीनले दक्षिण एसिया छिर्ने वैकल्पिक बाटो पहिल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । केही हिमालको अवरोध छिचोल्नसके नेपाल नै सबैभन्दा सजिलो गन्तव्य हुनेमा दुईमत छैन ।
चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोडलाई तीव्रता दिनु र पश्चिमबाट उर्लिंदै गरेको इन्डो–प्यासिफिक नीतिलाई रोक्न नेपाल भ्रमण चिनियाँ नेताका लागि एक मनासिव कारण हुनसक्छ । जहाँसम्म नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतले चीनको बीआरआईसँग एकाकार हुन चाहिरहेको छैन, कम्तीमा नेपाली मैदान ‘क्लियर’ गर्नु चीनको चुनौती हो । त्यसका लागि नेपालको हरेक तह र तप्कालाई बीआरआईमाथिको विश्वसनीयता प्रबर्द्धन गर्नु जरुरी छ । सी चिनफिङ नेपाल भम्रणमा जानु भनेको बीआरआईका झिनामसिना उल्झनहरू सुल्झाएर धमाधम कार्यान्वयनको बाटो खोल्नु हो । दुई वर्षअघि नै नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
चीन आफैं पनि गरिबी विरुद्धको युद्धमा होमिएको मुलुक हो । सुधार तथा खुलापन लागू भएको सन् १९७८ यताको ४ दशकमा चीनले ७० करोड नागरिकलाई गरिबीको दुश्चक्रबाट निकालेको छ । त्यस्तै सीको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा ६ करोड ८५ लाख नागरिक गरिबीको रेखाबाट उकासिएका थिए भने २०१२ अघि रहेको गरिबी दर १०.२ प्रतिशतबाट घटेर २०१७ मा ३.१ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसबाट पाठ सिक्नसके नेपालले पनि गरिबी निवारणमा सफलता प्राप्त गर्नेछ ।
तिब्बतको सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको नेपाललाई अझै प्रतिबद्ध बनाउन सीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुनेछ । सबैभन्दा बढी सुरक्षा खतरा मानिने सिन्च्याङमा पाकिस्तानले र तिब्बतमा नेपालले ठूलो पहरेदारी गरेको सर्वविदितै छ । तर नेपालका नेताहरूले भारत वा अन्य मुलुकमा तिब्बती नेताहरूसँग उठबस वा उनीहरूका कार्यक्रममा भाग लिएका घटनाले कहिलेकाहीं चीन सशंकित बन्न पुग्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणले यस्ता शंका, उपशंका हटाएर दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
दुई वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजनामा अहिलेसम्म नेपाल अलमलमै छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि यसमा पनि प्रगति हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
विश्वशक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिनबीच अर्जेन्टिना र ओसाकामा दुईचोटी भेट भइसक्यो । भेटघाट हुँदा ट्रम्प र सी व्यापार युद्ध रोकेर वार्ताका लागि तयार भएका थिए । यद्यपि वार्ता विफल नहुँदै ट्रम्प भन्सार कर वृद्धिका लागि हतारिए । युद्धको मुखैमा पुगेको २०१७ को दोक्लाम विवादमात्रै होइन, भारत र चीन बीचका अनेकन मतभेद मिलाउन सीले मोदीलाई वुहानमा निम्त्याएर गरेको वार्ताबाट पनि बुझिन्छ ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १८ औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि विदेशी पत्रकारमाझ सीले जनताप्रतिको जिम्मेवारी, पार्टी शासन तथा नयाँ सामूहिक नेतृत्वको मूल्य, मान्यताबारे प्रकाश पारेका थिए । राष्ट्रिय एकताको लहर ल्याउन सफल सीले ‘चाइना ड्रिम’ र बलियो सैन्य सपनालाई चुस्त बनाउँदै लगेका छन् ।
भिडलाई विश्वासमा लिन शक्तिमा मात्रै भर परेर हुँदैन । आफ्नो कार्यक्षमतामा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । जस्तो सीले भन्दै र गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले सपनाहरूको ठूलो बिस्कुन लगाएको छ, तर कार्यान्वयनको भेउ पाउन नसकेर भौंतारिरहेको छ । यस्तो बेला सी नेपाल पुगे भने नेपाली नेतृत्वले विकास सूत्र सिक्ने अवसर पाउनेछन् ।
चीनले प्राविधिक विकासबाट पाएको उपलब्धि सबैका लागि अनुकरणीय मान्न सकिन्छ । छिमेकीप्रतिको सम्मान र छिमेकीको गरिबी निवारण पनि चीनको उच्चस्तरीय भ्रमणको प्राथमिकतामा पर्न सक्यो भने नेपालले लाभ लिने कुरामा दुईमत छैन । चीन र नेपाल मिलेर आर्थिक उन्नतिमा सहकार्यको वातावरण बनाउन सहयोगी हुनेछ, सी भ्रमण ।
पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले चीनबाट धेरै सिक्न सक्छ । मौखिक नाराले मात्रै देश समृद्ध नहुने कुरा नेपालका नेताहरूले बुझेकै हुनुपर्छ । तसर्थ गरिबी निवारणमा फड्को मारेको चीनले नेपाली नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्न सक्छ । तीन महिनापछि नेपालको महत्त्वाकांक्षी भ्रमण वर्ष–२०२० सुरु हुँदैछ । यस्तो बेला सीले नेपालमा पाइला टेक्नु गुणस्तरीय पर्यटकका लागि शक्ति थप्नुको संकेत हुनेछ ।
छिमेकीको राजनीतिक स्थिरता र एकतामा जोड दिने चीनले अहिले नेपालमा भनेजस्तै वातावरण छ । यो मौका छोप्न चीनपछि पर्ने छैन । यसर्थ चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भविष्यको गर्भमा रहेको नेपाल भ्रमणको ग्ल्यामर नेपालका लागिमात्रै नभएर चीनका लागिसमेत उपलब्धिमूलक हुनसक्छ ।
लेखक चाइना रेडियो इन्टरनेसनल, बेइजिङमा कार्यरत छन् ।
प्रकाशित : आश्विन ४, २०७६ ०८:०७